Yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-mantis lobster | Ngeentlanzi
Enye yezona zinto zinomdla kakhulu ekufuneka uzithathele ingqalelo yile Isambuku semantis. Ke ngoko, siza kunikezela eli nqaku kwesi silwanyana. Yi-crustacean eye-odolo ye-Malacostráceos. Kukwaziwa ngamanye amagama aqhelekileyo anje ngemikhumbi, ii-lobster, iilwandle zasemantini, ishears kunye ne-tamarutacas. Ziyaziwa kwihlabathi liphela ngokuba ziimpawu ezinomdla kwaye zinomdla kuba zinegama elifanayo nesinambuzane sokuthandaza. Ukwanendlela yokuziphatha ehlaseleyo ebangele ukuba abizwe ngelo gama.
Kule nqaku uza kufunda yonke into malunga ne-mantis lobster. Siza kukucacisela ngokweenkcukacha.
3 Umnqweno we-mantis lobster
4 Ukuhanjiswa, ukondla nokuzala kwakhona
I-crustacean egama layo Ivela kwisinambuzane esaziwa ngokuba ngumthandazo wokuthandaza. Enye yezona zinto zifana kakhulu nesi sinambuzane yimilenze yangasemva ene-raptor. Ukongeza, inesakhono esiphakamileyo sokudibanisa nokusingqongileyo okuyingqongileyo, ke imeko yayo yokuphila iphakame kakhulu.
Banokuqonda ukukhanya kokukhanya kwaye basabele kuko. Phakathi kwezona zinto zibalulekileyo ngamehlo akhe amakhulu. Siyifumana ngobukhulu obahlukeneyo phakathi kwe-30 kunye ne-38 iisentimitha. Ngobungakanani kunye nokubonakala okuyoyikisayo, sithetha ngesilwanyana esoyikwa ngabo basingqongileyo.
Ineqokobhe eligubungela nentloko yayo ukongeza kumacandelo asibhozo okuqala anesifuba. Ndiyabulela kweli qokobhe elinokuthi ligutyungelwe kukulunywa, ukubethwa kunye neengozi ezinokuthi zibe nazo. Umbala wahlukile kwezinye izalamane ezinje ngelobster yasebukhosini kunye neblue, kuba yahluke kakhulu. Sidibene no Iindidi zemibala eyahlukileyo ebomvu, e-orenji, eluhlaza, mfusa, luhlaza, mdaka, mhlophe kunye ne-ocher. Yonke le mibala isisiseko sokutsala amehlo.
Ewe, ngaphandle kokuba inemibala eyoyikisayo, inesakhono esiphezulu sokudibana nokusingqongileyo. Iimpawu zamabhinqa zihlala zihle kunamadoda. Yindlela ecacileyo yokuwahlula. I-lobster ye-mantis encinci inokuba nemibala etyheli ngakumbi kunaleyo iluhlaza ngakumbi. Zonke ezi mpawu zahlukile phakathi kwabantu xa kufikwa ekuzifundeni nzulu.
Ixesha elilindelweyo ebomini lixesha elide kuba linamandla okuphila kwiindawo ezahlukeneyo. Bahlala becaphuka. Ngenxa yesi sizathu babizwa ngokuba yimbethi manqindi kuba bekwazi ukusebenzisa iinzipho zabo ukwenza uhlaselo olukhawulezayo nolunogonyamelo. Zizilwanyana ezizingelayo. Zinamandla amakhulu okuzingela kwaye zihlala zisebenzisa ixhoba lazo ngendlela ekhawulezileyo kwaye ekhawulezayo.
Ukuziphatha kwayo kuyindlongondlongo kangangokuba ezinye iisampulu ziye zakwazi ukophula iglasi ye-aquarium ngesibetho esinye. La mandla angaqhelekanga ayakhazimla kwaye abonwa enefuthe elingaphezulu xa isilwanyana siziva sivalwe ikona okanye sengozini. Kule meko, inyani yokuba neekristali njengeendonga imenza ukuba afune ukukhululeka kwaye ubetha ngawo onke amandla akhe.
Ngaphandle koburhalarhume obukhulu, zizilwanyana ezincinci ezaziwayo kwiindawo abahlala kuzo. Bavame ukuchitha ubomi babo bonke emingxunyeni nasemingxunyeni, bengabonwa. Ukuba bodwa, bazinikezela ekufihlweni nasekukhuselekeni belinde ixhoba ukuba lidlule kufutshane nomhombiso wabo. Xa oku kusenzeka, bahlasela ngokukhawuleza nangobundlobongela okubanceda ukuba bafumane ukutya abakufunayo. I-mantis lobster inesimo sokutshintsha, sebusuku kunye nokuziphatha kwangokuhlwa. Akukho xesha linye lasemini apho banomdla ngakumbi kunenye.
Ukuziphatha kwayo okuntsonkothileyo kwenza ukuba ibe nemilo eyahlukeneyo namanye amadoda ohlobo olunye. Ziyimilo yohlobo lwesiko oluyinxalenye yokuziphatha engaqhelekanga ngakumbi ekuhlaleni. Oku kuziphatha kuvela kwisidingo sokukhusela umhlaba ngokuchasene neentshaba ezithile abazithatha ziyingozi. Yindlela elula yokukhusela eyakho.
Umnqweno we-mantis lobster
Zizilwanyana ezinenkumbulo entle. Ukuba bahlala belalele kwimingxunya yabo belinde amaxhoba ukuba abanjwe, bayakwazi ukukhumbula abantu abangabamelwane. Ezinye iisampulu zinokukhumbula abanye abantu ngephunga elithile.
Ezinye zeentlobo ze-mantis lobster zingasebenzisa iipatheni ezibengezelayo kwimizimba yazo ukubonisa iintlobo zazo kunye nezinye ezikufutshane. Oku kusebenza ukuze ukwazi ukwandisa indawo yokuhambisa apho ihambisa khona iimpawu zokuziphatha.
Indlela yayo ekhethekileyo yokuhamba iyenza ibe sisilwanyana esinomdla. Isebenzisa imilenze yayo yangasemva ukufumana amandla. Nje ukuba unamandla ngokwaneleyo, usinga kwindawo ofuna ukuya kuyo. Ngale ndlela yokuhamba, banokuhamba umgama ukuya kuthi ga kwiimitha ezimbini ngeempembelelo nganye. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba banike iimpembelelo ezingapheliyo, ezigubungela umgama wesiqingatha semitha. Iimpembelelo ezinamandla zikwenza ufune amandla amaninzi kwaye uzisebenzise kwiimeko ezizodwa.
Ukuhanjiswa, ukondla nokuzala kwakhona
Phantse zonke iintlobo zeemantis lobster zenza ikhaya lazo kulwandle olushushu nolushushu ngenxa yokuba zifuna ubushushu obuphakathi. Kukho intabalala enkulu kulwandle lweCaribbean nakuLwandlekazi lwaseIndiya nolwePasifiki.
Ngokumalunga nokutya kwabo, baziwa njengezilwanyana ezinoburhalarhume ezinokuziphatha okukhohlakeleyo. Oku kubakhokelela ekubeni batye ukutya okwahlukeneyo ngokusekwe kwiintlanzi ezahlukeneyo, iimollusk kunye nezinye ii-crustaceans. Abanye abantu banokude babenamava okutya abantu.
Xa i-mantis lobster ikhwelana, iqokobhe layo linefluorescence esebenzayo. Esi salathisi senza ukuba amadoda azi ukuba kufuneka enze ntoni. Abafazi bayachuma xa behamba ngamanqanaba athile omjikelo wamaza. Oku kunceda ukuthintela ukulahleka kwamandla ngenxa yomzamo wokuchasene namaza.
Banokuba neziqendu ezingama-20 ukuya kuma-30 zembewu ngexesha labo bonke ubomi. Kuxhomekeka kumntu ngamnye, unokuba nemikhwa ngokupheleleyo yokukhathalela ulutsha kunye nobudlelwane phakathi kwesi sibini. Kule meko, ayibhekiseli kwizinambuzane, kuba emva kwesenzo sesondo, imantis yabasetyhini ayityi iqabane layo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-mantis lobster.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Isikhova seMantane